सामान्य अंकले बढेको मंगलवारको बजारमा दश कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च बृद्धि - Aarthiknews
सामान्य अंकले बढेको मंगलवारको बजारमा दश कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च बृद्धि
काठमाडौं । मंगलवार सामान्य अंकले बढेको बजारमा दश कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च बृद्धि भएको छ । यस दिन समता घरेलु लघुवित्त र महिला लघुवित्तको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ भने अन्य आठ कम्पनीको शेयरमूल्य पनि उच्च दरमै बढेको छ ।
मर्जर पछिको पहिलो कारोबार दिन घरेलु लघुवित्तको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ५५ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ६०५ पुगेको हो । त्यस्तै लगातार उच्च दरमा बढ्दै आएको महिला लघुवित्तको शेयरमूल्य पनि यो दिन प्रतिकित्ता रू. ३७८ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ४ हजार १५८ पुगेको छ ।
यस दिन विशाल बजार कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९९ प्रतिशत अर्थात प्रतिकित्ता रू. ६१६ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ६ हजार ७८४, सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सको ९ दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात प्रतिकित्ता रू. २३३ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. २ हजार ५६८ र राधी विद्युत कम्पनीको ९ दशमलव ९० प्रतिशत अर्थात प्रतिकित्ता रू. ५२ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ५७७ पुगेको छ ।
त्यस्तै कारोबारको दोस्रो दिन रू रू जलविद्युत परियोजनाको शेयरमूल्य पनि ९ दशमलव ९० प्रतिशत अर्थात प्रतिकित्ता रू. ३८ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ४२२ पुगेको छ भने सिंगटी हाइड्रोको ९ दशमलव ९२ अर्थात प्रतिकित्ता रू. ४३ ले बढेर रू. ४८१ पुगेको छ । युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य पनि यो दिन ९ दशमलव ७३ प्रतिशत बढेको छ । प्रतिकित्ता रू. २२ ले बढेर युनाइटेड हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य रू. २४८ पुगेको हो ।
९ दशमलव ६८ प्रतिशत बढेको पञ्चकन्यामाई हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य रू. २०४ पुगेको छ भने युनिभर्सल पावरको शेयरमूल्य पनि यो दिन ८ दशमलव ९९ प्रतिशत बढेर अन्तिम मूल्य रू. १९४ पुगेको छ । पञ्चकन्यामाई हाइड्रोको प्रतिकित्ता रू. १८ र युनिभर्सल पावरको प्रतिकित्ता रू. १६ ले यो दिन शेयरमूल्य बढेको हो ।